ကျန်းမာကြံခိုင်ဘို့ - SANTHITSA
သင့် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာ ကြံခိုင်ဖို့ သင်နဲ့ သင့်တော်မဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုသာ ရွေးချယ်ပါ ။ သင်ဟာ သီးခြား နေထိုင်တတ်သူ ဖြစ်ရင် အများနဲ့ မရောယှက် စေမဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း များကို ရွေးချယ်ပါ ။
ဥပမာ … ရေကူးခြင်း ၊ စက်ဘီး စီးခြင်း ၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း ၊ ပြေးခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း များကို ပြုလုပ်ပါ ။
ဒါမှမဟုတ် အားကစား ခန်းမမှာ နည်းပြ ဆရာနဲ့ လေ့ကျင့်ခြင်း မျိုးကလည်း သင့်ကို အစဉ်ပြေ စေနိုင် ပါတယ် ။ သင်က အပေါင်း အသင်း မက်သူ ဖြစ်နေတယ် ဆိုရင် လူအများနဲ့ ပြုလုပ် ရမဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း ကို ရွေးချယ် သင့်ပါတယ် ။
ဥပမာ …. သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အတူတူ ပြုလုပ် နိုင်တဲ့ တောင်တက်ခြင်း ၊ ဘောလုံး ကန်ခြင်း ၊ ကြက်တောင် ရိုက်ခြင်း ၊ စားပွဲတင် တင်းနစ် ကစားခြင်း ၊ ကခုန်ခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း များကို ပြုလုပ် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သင်ဟာ ပင်ပန်း နာကျင်မှာ ကြောက်ရွံသူ ဆိုရင် ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန် ညင်သာ တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း များကို ရွေးချယ် ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဥပမာ ….. ယောဂ ကျင့်စဉ် လေ့ကျင့် တာမျိုး ၊ ထိုက်ချိ ကစား တာမျိုး ၊ ခပ်သွက်သွက် လမ်းလျှောက် ခြင်းမျိုး စတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို မပင်ပန်း မနာကျင်မဲ့ လေ့ကျင့်စဉ် မျိုးကို ပြုလုပ် ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မိမိကိုယ် မိမိ ဘယ်လို လေ့ကျင့်နည်းမျိုး အပေါ်မှာ အာသာ ဆန္ဒ ရှိသလည်း ဆိုတာ ကို သေချာစမ်းစစ် ကြည့်ပြီး တစ်ခုခု ကို လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ ။
သင်ဟာ ဘယ်လောက်ပင် ခွန်အားကြီးသူ ဖြစ်နေပါစေ လေ့ကျင့်ခန်းများ ကို လုပ်ကို လုပ်ရန် လိုအပ် ပါတယ် ။ သို့မှသာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး အရွယ်တင် နုပျိုမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
သငျ့ ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာ ကွံခိုငျဖို့ သငျနဲ့ သငျ့တျောမဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြားကိုသာ ရှေးခယျြပါ ။ သငျဟာ သီးခွား နထေိုငျတတျသူ ဖွဈရငျ အမြားနဲ့ မရောယှကျ စမေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး မြားကို ရှေးခယျြပါ ။
ဥပမာ … ရကေူးခွငျး ၊ စကျဘီး စီးခွငျး ၊ လမျးလြှောကျခွငျး ၊ ပွေးခွငျး စတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး မြားကို ပွုလုပျပါ ။
ဒါမှမဟုတျ အားကစား ခနျးမမှာ နညျးပွ ဆရာနဲ့ လကေ့ငျြ့ခွငျး မြိုးကလညျး သငျ့ကို အစဉျပွေ စနေိုငျ ပါတယျ ။ သငျက အပေါငျး အသငျး မကျသူ ဖွဈနတေယျ ဆိုရငျ လူအမြားနဲ့ ပွုလုပျ ရမဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး ကို ရှေးခယျြ သငျ့ပါတယျ ။
ဥပမာ …. သူငယျခငျြး တှနေဲ့ အတူတူ ပွုလုပျ နိုငျတဲ့ တောငျတကျခွငျး ၊ ဘောလုံး ကနျခွငျး ၊ ကွကျတောငျ ရိုကျခွငျး ၊ စားပှဲတငျ တငျးနဈ ကစားခွငျး ၊ ကခုနျခွငျး စတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး မြားကို ပွုလုပျ ပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
သငျဟာ ပငျပနျး နာကငျြမှာ ကွောကျရှံသူ ဆိုရငျ ဖွညျးဖွညျးနဲ့ မှနျမှနျ ညငျသာ တဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး မြားကို ရှေးခယျြ ရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
ဥပမာ ….. ယောဂ ကငျြ့စဉျ လကေ့ငျြ့ တာမြိုး ၊ ထိုကျခြိ ကစား တာမြိုး ၊ ခပျသှကျသှကျ လမျးလြှောကျ ခွငျးမြိုး စတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကို မပငျပနျး မနာကငျြမဲ့ လကေ့ငျြ့စဉျ မြိုးကို ပွုလုပျ ပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
မိမိကိုယျ မိမိ ဘယျလို လကေ့ငျြ့နညျးမြိုး အပျေါမှာ အာသာ ဆန်ဒ ရှိသလညျး ဆိုတာ ကို သခြောစမျးစဈ ကွညျ့ပွီး တဈခုခု ကို လုပျဖွဈအောငျ လုပျပါ ။
သငျဟာ ဘယျလောကျပငျ ခှနျအားကွီးသူ ဖွဈနပေါစေ လကေ့ငျြ့ခနျးမြား ကို လုပျကို လုပျရနျ လိုအပျ ပါတယျ ။ သို့မှသာ ကနျြးမာကွံ့ခိုငျပွီး အရှယျတငျ နုပြိုမှာ ဖွဈပါတယျ ။
Total Hits : 2076580